Kedu ihe bụ AOL System Mechanic? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Aol system information - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kedu ihe bụ AOL System Mechanic?
Nhazi usoro, Si iolo, bụ a software ụlọ nke na-eme, optimizes, Ndozi na mma-awụ ọsọ n'ugwu gị na kọmputa nasistemụnwere ike ịgba ọsọ ọsọ na nke kachasị mma.Nhazi usorosoftware: Na-agba ọsọ ọsọ ịntanetị site na iji njiko njikọ njikọta.
Ekele m unu, kelee Muradi Tutorial's YouTube channel taa. Aga m egosi gị otu esi edozi njehie na - egbochi gị ịgbakwunye akaụntụ email AOL na ozi mmapụta na ihe mejọrọ. Anyị enweghị ike ịbanye na sava POP ma ọ bụ IMAP na-abata ma ọ bụ ụdị njehie ndị ọzọ yiri nke a Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye Gmail na Outlook ị nwere ike ịga na chandi YouTube YouTube Muradi Tutorial.
Pịa na isiokwu ahụ wee chọta ederede njehie Outlook maka Gmail, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye akaụntụ email Yahoo ị laghachi na Muradi nkuzi youtube chanel pịa isiokwu wee chọta isiokwu ahụ site na Outlook - Njehie ijikọ akaụntụ yahoo tinye tinye akaụntụ dee Email AOL na ntọala akaụntụ pop na igbe ihe nkesa na-abata pop.aol.com dee ala 995 ebe a tinye akara nkesa a chọrọ njikọ ezoro ezo SSL ma ọ bụ TLS na sava ozi na-apụ apụ wt downtmtp.aol.com na ọdụ ụgbọ mmiri dee 465 si ebe a SSL ma ọ bụ TLS mgbe ị hụrụ na ị banyere ozi ziri ezi pịa ọzọ tinye paswọọdụ gị.
Ana m eji paswọọdụ AOL nke m ugbu a wee kụrụ Jikọọ mgbe ị hụrụ ozi a, wee gaa AOL Email, AOL Email na akụkụ aka nri aka nri, pịa akara ngosi aha gị wee họrọ Lelee akaụntụ m. Pịa na profaịlụ gị picture na pịa na m profaịlụ. Ebe ị ga-ahụ Nchedo Akaụntụ Pịa na Nchedo Akaụntụ.
Dee adreesị email gị wee pịa Next Tinye paswọọdụ gị Pịa Ọzọ Ozugbo ị nọ na Nchedo Akaụntụ na ibe a, gbadaa, ị ga-ahụ ebe a ka ịhọrọ ngwa gị. M họrọ Outlook Desktọpụ wee pịa Mepụta. Nke a bụ paswọọdụ copy idetuo ya ma gaa na Outlook si ebe a click pịa Gbanwee Ntọala Akaụntụ na ibe a na Ntọala Akaụntụ POP ma jide n'aka na ozi niile ziri ezi dịka.
B. A na-enyocha ọdụ ụgbọ mmiri na-abata na 995, ozi ịntanetị na-apụkwa dị mma Port dịkwa mma ebe a SSL / TLS ahọrọkwara ihe niile dị mma anyị pịa na-esote ebe a ị nwere ike tinye paswọọdụ nke ngwa ahụ wee pịa pịa pịa. Ysmụ okorobịa, gbaa mbọ chekwaa paswọọdụ ahụ na kọmputa gị.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu na - ahụ ihe ana - egosipụta njehie Outlook ka ị na - eji paswọọdụ AOL gị na okwuntughe emepụtara ngwa. Otu n'ime ọrụ ndị a, mana okwuntughe ngwa eji arụ ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ, mana ọ naghị arụ ọrụ na kọmputa m. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ na kọmputa gị.
Ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ data na draịvụ ike nwere ike emerụ. Gịnị bụ ihe ngwọta ya ugbu a? Ihe ngwọta bụ, ọ bụrụ na ị nwere ụdị nsogbu a, ị kwesịrị ịhụ ihe ntọala ntọala ị na-eji POP ma ọ bụ IMAP ntọala akaụntụ yana ị ga-ahụkwa na ị banyere ozi ziri ezi. Ọ bụrụ na ozi ahụ ziri ezi ma ị na-eji IMAP, gbanwee IMAP ka POP.
Ọ bụrụ na ị na-eji POP, olee otu m ga esi eji ya. Gbanwee POP ka IMAP. Ya mere, ka anyị mee ya.
Aga m agbanwe POP na IMAP. M pịa Gbanwee Ntọala Akaụntụ wee pịa Azụ Ebe a pịa Ntọala Akaụntụ M Ọ bụrụ na bọtịnụ njikọta adịghị ahụ anya, gaa naanị họrọ otu akaụntụ wee laghachi họrọ akaụntụ gị ịchọrọ ị jikọọ pịa Mgbe ijikọ, họrọ oge a IMAP. N'ebe a, ị gha ebu ụzọ banye paswọọdụ akaụntụ AOL gị.
Pịa Jikọọ pịa Gbanwee Ntọala Akaụntụ. Ozugbo ị nọ na ibe a ntọala ntọala akaụntụ IMAP. Na ọdụ ụgbọ mmiri 993 na POP ọ bụ 995 usoro ezoro ezo ọ bụla SSL ma ọ bụ TLS dịkwa mma nke dịkwa mma ọdụ ụgbọ mmiri dịkwa mma ebe a usoro zoro ezo dịkwa mma.
Na m ikpe, ihe ọmụma niile na-akpaghị aka ziri ezi. Ọ bụrụ na ozi ahụ ezighi ezi na nke gị, ịnwere ike ịgbanwe ya wee pịa Ọzọ, ebe a mado paswọọdụ gị mepụtara ka nke a, pịa Jikọọ, ị ga-ahụ na ọ na-abịa ugbu a, yabụ ihe niile dị njikere mgbe ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ozi ịntanetị ndị ọzọ, pịa 'Emela'. Gaa Ziga ma ọ bụ Anata, pịa Zipu ma ọ bụ Nata Nchekwa niile, ma ọ bụ chere.
Ọ ka na-abịa, ị na-ahụ ozi ịntanetị na-abịa, nke ahụ bụ ya ndị folks, ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ide na ngalaba nke isiokwu a. Aga m aza ajụjụ gị ozugbo ma ọ bụ chọta azịza maka gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ịdenye aha na ọwa m, biko denye aha na ọwa m ma nwee mmasị na edemede ahụ.
Daalụ na ọ dị mma!
AOL Sistemụ Nhazi ọ dị mma?
Isi Okwu. IoloNhazi usorona-aga n'ihu na ogologo oge ya dịka otu n'ime ngwa ọrụ PC kacha mma. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ahụ na-egwu ala na kọmputa gị iji mebie draịvụ ike,mmeziihe ndekọ, ma rụọ ọrụ ndị ọzọ na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma. PCMag editọ họrọ nanyochangwaahịa onwe ha.
(Egwu egwu punk) ♪ - (Finebros) Ọ dị mma ka anyị agaghị ekwe ka ị meghachi omume n’otu isiokwu maka ihe omume a. - M na - atụ ụjọ - (Finebros) Kama ị na - emeghachi omume na ya - Chineke m! Na-egwu m egwu. Ọ bụ Dell.
Ọ bụghị onye ọbụ abụ, mana A Dell - m na-ahụ ihe ndị a na ọba akwụkwọ ochie - ndị a bụ ndị na-etinye diski diski na ha? - Eziokwu ahụ na nlele ahụ buru ibu karịa kọmpụta ahụ n'onwe ya na - ekwu ọtụtụ ihe - enweghị m ihe ọ bụla Mara ihe afọ a bụ, mana ọ na - adị m ka ọ dị tupu amụọ m - Anyị nwere ihe dị ka nke a obere oge n'ihi na mgbe ahụ anyị mechara kwalite - Na na na, dị ka nke mbụ kọmputa na mgbe e wuru? - (Finebros) Kọmputa izizi wuru ga-aha nha ụlọ a. (ọchị) - Ọ dị mma, dịkwa mma. Maka m, ọ dịka kọmputa izizi ewuru. (Egwu punk rock) ♪ - (Finebros) Ya mere, gaa n'ihu ma gbanye kọmpụta ahụ - Ọ dị mma, ọ bụ, ọ dị nwa oge - m ga-anọ ebe a na-eji nnukwu bọtịnụ.
Ma ọ bụ ọ bụghị. Ọzọ? Oh, m ga-ejidesi ya ike, mba! Chere ihe Heck - Nke a bụ ileba anya. Mbanụ.
Uh ... - Echere m na nke ahụ ziri ezi? - (Finebros) Nke ahụ bụ naanị ileba anya. - Oh gbaa. (Kọmputa akpụkpọ ụkwụ elu) - (mmeri) Ooh! (ọchị) Nna m ga-eji m anya isi ugbu a - Ọ bụ ebe a bụ ike. (Kọmputa na-amalite) Ọ dị mma.
ihe bụ scmii
Amaara m nke ọma (Computer hums loudly) - Theda na-adọrọ nnọọ mmasị. Echeghị m na anụtụla m kọmpụta na-eme mkpọtụ ndị a ná ndụ m. (Kọmputa mkpọtụ) - Ọ na-ada ụda karịa.
Ọtụtụ mkpọtụ. (Computer hums) - Wepụta oge ebe ahụ. (Humming Ize Okwu song) ♪ - Ọ na-ewe oge! - Ọ na - abụkarị ị buut, mgbe ahụ ị ga - enweta nri gị ma mgbe nri gị dị njikere ị bịara ebe a ọ bụrụlarị booted - Oh, Windows 95.Okay, nke ahụ dị ntakịrị tupu oge m - Ọ bụ prehistoric! (Finebros chuckles) Ọ bụ n'ezie.
Ọ bụ dinosaur ochie - Oh! Oh! Dịkwa mma.- (Finebros) Ya mere, sistemụ arụmọrụ a na kọmputa gbanwere ihu desktọọpụ kọmputa ruo mgbe ebighị ebi n'ọtụtụ ụzọ, nke ahụ bụ Windows 95. - Wow.- 95, dị ka 1995? - (Finebros) Nụrụ nke Windows 95? - Echere m, Enwetụbeghị m ya, mana anụla m banyere ya - Dịka egwuregwu! (Chuckles) Ahuru m otutu ihe na intaneti dika 'Ha, ha! Windows 95 eme nzuzu .’- Nke ahụ bụ ihe mere ka ị daa na maapụ mgbe ọ ghọrọ ihe ị nwere sistemụ arụmọrụ gị. - Ndị ma teknụzụ kwesịrị ịma ihe karịrị nke ugbu a.
Kwesịrị ịma akụkụ nke oge gara aga - (Finebros) Yabụ kedu ihe dị iche n'ozuzu ma e jiri ya tụnyere kọmputa nke oge a? - (chuckles) Nsogbu bụ ebe na-amalite? - (ochi) Ihe niile dị ka ihe na-agwụ ike na oge ochie! - Ọ dị ka Windows sistemụ arụmọrụ ugbu a, mana ha abụghị nke ọkaibe. - O yiri ka ọ ka njọ. The n'ọnụ na-nkọ.
Ọ bụ ntakịrị ihe ọzọ. - Ọ tọgbọ chakoo. Ọ dị m ka onweghị ihe ọ bụla na - aga, naanị Internet Explorer na Igbe mbata na ihe ndị ọzọ niile.
Dịka ọmụmaatụ ihe ndị bụ isi. - (Finebros) Ọ dị mma, ya mere, anyị ga-ejegharị gị site na Windows 95. - Ọ dị mma - (Finebros) Ya mere lelee ngwa ahụ.
You nwere nke ọ bụla n'ime ndị a? - Ihe mkpofu, (ọchị) My kọmputa, na ọ bụ ya. - Ọ dị mma, amaara m ahịhịa. Amaara m Internet Explorer. - Internet Explorer nke a na-atụ ụjọ. (ọchị) Enwere m ike ịkọwa na ọ ka njọ karịa ka anyị chere na ọ dị ugbu a - (Finebros) Ya mere, ka anyị gaa ntanetị site na ihe nchọgharị afọ iri wee mepee ya. - Anyị enwere ike iji ntanetị gaa ya na ntanetị? M na-eme a abụọ click. (Pịa ugboro abụọ na òké) - Ọ na - ekwu, 'Internet Explorer enweghị ike imeghe saịtị ịntanetị .'- Oh chukwu, echere m na agbajisịla m ya. - Oh, m ga-edozi ihe a I-- chere, ọ bụ EDI? ? - (Finebros) Ọfọn, ịntanetị anaghị arụ ọrụ n'ihi na enweghị WiFi na Windows 95. - G WHATN ?!?! Gini kpatara Internet Explorer? Nke ahụ enweghị isi - Kedu ka ị si abanye na whenntanetị mgbe enweghị WiFi? - Ọ dị mma, kedu ka m ga esi esi nweta ntanetị? - Kpọọ, tinye. - Ọfọn, ị ga-enwe a ekwentị akara jikọọ na gị modem iji nweta internet. - Me-- chere obere oge, gịnị bụ mọdem? - (Finebros) Mọdem bụ ngwaọrụ na-eziga data na ma ọ bụ site na kọmputa gị ma weta gị n'ịntanetị.
N'oge ahụ, ndị modem kwesịrị iji akara ekwentị mee ka nke a kwe omume. - Yabụ ị ga - eji ekwentị gị wee banye na ịntanetị? - Oh, na nke ahụ adịghị oke oke (na-agbasi ike)? - Ọ bụ ụjọ ịtụ n’echiche na Wi-Fi dị anyị oke mkpa ugbu a. Ọ bụrụ na ị gaa ebe ọ na-abụghị wi-fi, nke ahụ bụ ihe kacha njọ nwere ike ime gị - (Finebros) Ọfọn, ụzọ ọzọ ị ga-esi nweta ịntanetị bụ ọrụ dịka AOL anyị nwere.
Gaa n'ihu ma mepee ya. - Ana m enweta ikpe akwụghị ụgwọ. - Ahụrụ m igodo, 'gọzie' na ụwa yana akara ngosi Illuminati. - Nzọụkwụ otu, ọ na-ebu ibu. - Nke a toro ogologo oge nri gị nke abụọ n'oge a - 'Mbido mbụ emeghị nke ọma.' Ị na-egwusa m egwu?! - Ugbu a, anyị na - ebido ọzọ wee laghachite otu - Chukwu, nke a bụ ụdị ụfụ! inyinya-ibu. (ịchị ọchị) M ga - ahapụ - Oh, ka anyị pụọ.
Oh, agaghi. Enweghi ike ... 'ibido modem m' - (Finebros) Ihe ohuru ohuru nke biara na Windows 95 bu bọtịnụ mmalite. - Ee, nke ahụ bụ nzuzu.
Ị dịghị mgbe ọ ga na-eche na ndị dị otú a dị mfe obere ihe ka na 2016.- (Finebros) Tupu Windows 95, a otutu kọmputa nwere ihe ọ bụla dị ka na na navigate.- N'ihi ya, e dị nnọọ a otutu efu people- Ya mere nobody- i nwere ike ọbụna iji kọmputa? - Mgbe ahụ kedu ka ị ga-esi mee njem n’ihe? - Ọ bụ na ha enweghị bọtịnụ ọchụchọ ma ọ bụ ihe ọ bụla? Mgbe ahụ ị na-etinye ụfọdụ koodu? - (Finebros) itzọ o si arụ ọrụ n'ezie bụ ranon ihe a na-akpọ DOS. - DOS? - DOS! Oh, m nụrụ nke ahụ! - (Finebros) Na n'okpuru DOS ị ghaghị itinye koodu kọmputa iji mee mmemme ma ọ bụ mepee faịlụ. - Oh! - Nke ahụ bụ ụdị osisi. - Ee, nke ahụ dị mfe, mana nke ahụ dị ọfụma - Ndị mmadụ - ha mụtara koodu kọmputa tupu ha enweta kọmputa.
Nke ahụ dị ka ọrụ nnukwu ọrụ n'agbanyeghị! - Mgbe ị nọ na iPad gị, ị ga - abanye obere koodu oge ọ bụla m chọrọ ịgbanwe ngwa ma ọ bụ ihe ọ bụla. Echere m na ọtụtụ mmadụ ga-enwe mmasị ịnwe ha. Choo faịlụ XYZ 102! 'ma ọ bụ ihe yiri ya.
Nke ahụ bụ naanị - Agaghị m eji kọmputa - (Finebros) Windows 95 dị oke egwu mgbe ọ pụtara. A rere nde asaa n'ime izu ise mbụ ewepụtara ya - Chaị! - N'ezie? Nde asaa? - Ọ bụghị ihe ijuanya. Bill Gates fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nna nke ngwanrọ n'ihi na ọ mepụtara ma mee ọtụtụ ihe nke gbasaa na mbara igwe anyị dum - (Finebros) O were diski diski iri na atọ iji wụnye Windows 95, n'otu n'otu.
Chaị! Nke a siri ike - Nsọ dị nsọ, ọ na - ewe oge - echetara m ihe floppy disk bụ. Nke ahụ bụ square ihe, ọ bụghị ya? - ọ ga-ewe ọtụtụ awa iji wụnye. (Finebros) Ọ dị ka wụnye ihe ugbu a? - Mba (chuckles) Mba, ọ na-abụkarị na ị jikọọ na wi-fi wee budata - mgbe m tinyere egwuregwu iji budata egwuregwu na igbe X-igbe m, ọ na-ewe ihe dị ka awa abụọ! Anọ m na-eche Fallout 4 m ka m budata ma echere m (jiri ụjọ na-akụ tebụl) 'Enwere m ike ịkpọ nke a?' - Ohaneze dị ka mgbe m kwesịrị imelite kọmputa m, mee obere melite ma ọ bụ nweta nchedo m, nwute dịka ọ na-ada, ọ bụrụ na ọ na-ewe ihe karịrị nkeji ise enwere m nnukwu nkụda mmụọ. - (Finebros) Ya mere, anyị nwere afọ gara aga gafere Windows 95 nke afọ 20. - Oh jụụ! Obi ụtọ na Birthday.- (Finebros) Na niile technology ị na-etolite na na ojiji taa, mgbe ị na-eche nke otú nnọọ ihe na-abịa na otú ha na-eji abụ mgbe ị na-na a na kọmputa ma ọ bụ na gị nọ ala na ekwentị? ịdị ka - Ndammana.
Ndi idịghe kpukpru owo ẹnam oro? Ọ bụghị mmadụ niile na-ewe obere oge wee chee, 'Damn, nke a dị mfe' - Ọ bụ nzuzu iche na ekwentị m dị ike karị - Ọtụtụ ndị okenye ga-elele edemede a wee sị, 'Oh, lelee nke a pụọ! Ndị ndị na-eme na-amaghị ihe Windows 95 bụ na ha dị nnọọ tech-savvy na Mkpughe ụbọchị ndị a. 'Ọ dị mma, ndo, ọ dị mma? m kpatara m mụrụ mgbe na. O nwere ike ịbụ na ị nwere mmeghachi omume a na kọmputa ndị toro eto mgbe nke a pụtara - (Finebros) Ya mere n'ikpeazụ gaa n'ihu mechie kọmputa ahụ - chere ... agbanyeghị enwere ụzọ ziri ezi iji mee nke a. Achọtara m - goodbye Shut down. - Ọ ga-eme mkpọtụ? 'Ọ dị mma iji gbanyụọ kọmputa gị ugbu a.' Ya mere enwere m ịgbanwụ ya n'ụzọ anụ ahụ? - 'Ọ dị mma iji gbanyụọ kọmputa gị ugbu a.' Mba - (chuckle) 'Ọ dị mma ugbu a ịgbanyụ -' nke ahụ na-atụ m ụjọ ntakịrị. (Na-agbanye bọtịnụ) - gịnị kpatara ọ ga - eji gwa m na ọ dị mma iji gbanyụọ ya mgbe ọ na - adịghị mma tupu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m gbalịrị ime ya na - enweghị usoro a? Ọ ga-agbawa? (Kọmputa na-agbanyụ) (Finebros chuckles) - WIN! - Daalụ maka ikiri ihe omume nke afọ iri na ụma nke Mmekọahụ - Denye aha.
Ọ bụ ọnụ ahịa ya. Ana m ekwe nkwa.- Hey, daalụ maka ịnwe m ma ugbu a ọ dị mma ịgbanyụ edemede a
Kedu ihe AOL na-eme?
AOLbụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ mbụ nke Internetntanetị n'etiti 1990s, na akara kachasị amara na weebụ na United States. O bu ụzọ nye nde ndị America ọrụ ịkpọ oku, yana ịnye web portal, e-mail, izi ozi ozigbo ma mechaa ihe nchọgharị weebụ na-eso nzụta Netscape.
Nnọọ. I nwere ozi! Ama m. Nke ahụ niile bụ AOL.
Ọ bụrụ n ’ị maara ụda m nke ọma, enwere ezigbo ohere ịbụ na ị bụ otu n’ime ndị debanyere aha nde 20 + AOL ndị ji ịntanetị na-aga na sistemụ ozi AIM. Gịnị bụ gị AOL aha njirimara? Ogbogu Okonji? Aha ihuenyo AIM m bụ Bugsthatboy na TraineeboyC.
Echetara m aha AOL m bụ mockalot. Ọtụtụ ndị lere AOL anya dị ka eze nke mgbasa ozi na 90s na mmalite 2000s. N'oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ zuru ebe niile na ọdịbendị US na ọ bụ isi ihe nketa na 1998 ihunanya ọchị ''ve nwere GotMail' nke Tom Hanks na Meg Ryan gụrụ.
M na-agbanye kọmputa m. Ana m aga n'ịntanetị. Nnọọ.
M na-eku ume ume ruo mgbe m nụrụ obere okwu atọ: I nwere ozi! Mgbe ọ kacha elu na Disemba 1999, AOL nwere isi ahịa nke $ 222. Ma nbata nke ntaneti brọdbandị na ntiwapụ nke ntụpọ-ntụ afụ belatara onye bụbu onye ntanetị dị ka onyinyo nke mbụ ya. O siiri m ike ile AOL anya maka afọ 10 gara aga n'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ kachasị na 90s nke nyere aka kọwaa ịntanetị maka ọtụtụ mmadụ, nyere aka mee ya ọtụtụ ndị mmadụ na ntanetị maka oge mbụ.
Ma ọ bụ ọgụ. AOL mụrụ na 1983 ọ bụghị dịka onye na-eweta ọrụ ịntanetị, mana dịka ụlọ ọrụ egwuregwu isiokwu. N'oge ahụ, a na-akpọ ụlọ ọrụ ahụ Control Video Corporation, ọ na-enyekwa ndị na-egwu egwuregwu ohere itinye ihe njikwa egwuregwu Atari 2600 ha n'ime akara ekwentị ha iji budata egwuregwu ederede.
Azụmaahịa ahụ enweghị ihe ịga nke ọma ma alọghachi obere oge ka nke ahụ gasịrị dị ka QuantumComputer Services na-enye ohere ịnweta ozi ngwa ngwa, egwuregwu, akụkọ, ịzụ ahịa n'ịntanetị, na email. Ọ bụ rue 1991 na America Online, dị ka AOL si akpọ aha ya, malitere ma bido AOL n'ebumnuche imeghe ndị ọrụ niile na thentanetị, ọ bụghị naanị agụmakwụkwọ, ọ bụ mmadụ ole na ole nọ n'ịntanetị. Ọbụna nke ahụ, PC enweghị modem na ha.
Imirikiti ndị na-emepụta pc echeghị na ndị mmadụ chọrọ ịntanetị. Na sava siri ike iru n'oge ahụ. Ha chọrọ ezigbo nkà na ụzụ.
Ya mere, ihe AOL lekwasịrị anya dị mfe. Kedu ka ị si mepụta ihe dị mfe iji, eserese eserese eserese nke onye ọ bụla nwere ike iji? N'okpuru nduzi nke CEO Steve Case, America Online, anyị rere nt n'ihu ọha na 1992 maka $ 11.50 / share.
madụ 25 freezes
Bido na 1993, AOL bidoro ọgụ ike ike iji dọta ndị ọrụ ọhụụ site na nzipu diski diski na CD ndị nwere sọftụwia ụlọ ọrụ na awa ole na ole nke ọrụ n'efu nye ndị ahịa. Mgbe m chere gbasara AOL, m na-eche maka ite igwe ndị ahụ ha nwere ike zigara m ugboro abụọ n’izuụka ka m debanye aha maka AOL. Enwere m ike otu narị n'ime ha.
Ha bịara naanị kwa ọnwa. Mgbasa Ozi ahụ Rara Ọrụ Site na 2000, ndị debanyere aha AOL esiwo na-erughị 200,000 na 1992 ruo nde 25. N'otu afọ ahụ, AOL kwupụtara na ọ ga-akawanye njọ.
Obi dị anyị ụtọ ịnwe unu niile ebe a taa ka anyị na-ekwupụta njikọta iji mepụta ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ nkwukọrịta zuru ụwa ọnụ nke Internetntanetị, na-efu ihe karịrị $ 160 ijeri ma na-efu ihe karịrị $ 160 ijeri site na AOL Time Warner bụ otu n'ime njikọ kachasị mma na akụkọ ntolite. Ọ dị ka ezigbo echiche n'oge ahụ. Site na AOL, anyị maara na anyị chọrọ ụzọ iji brọdband.
Oge Warner bụ onye na-arụ ọrụ sistemụ kasịnụ ma nwee ọtụtụ ụdị, CNN na HBO na ihe ndị ọzọ, nke anyị chere na ọ ga-aba uru na ụwa teepu esenidụt. Site n'echiche nke Time Warner, enwere ụlọ ọrụ mgbasa ozi siri ike, mana ọ nweghị ụzọ doro anya n'ezie maka ọdịnihu dijitalụ. Yabụ njikọ nke ụlọ ọrụ abụọ a bụ ngwakọta mmeri na echiche anyị.
Ma ọ garaghị dịka e zubere. Site na mbido, ụlọ ọrụ jikọtara ọnụ enweghị ike iru oke atụmanya ego ya. Iji mee ka ihe ka njọ, ebuka teknụzụ nke toro na 1990s na mberede dara na ugwu mgbe ntaneti ịntanetị gbawara.
N'oge ahụ, azụmaahịa AOL nwere ntanetị na ntanetị na ego mgbasa ozi. Mgbe ntụpọ ntụpọ ahụ dara n’afọ 1999 ma ọ bụ n’afọ 2000, ụlọ ọrụ ndị ahụ niile kwụrụ ụgwọ AOL lara ego ma ọ bụ laa azụ nke na ha enweghịzi ike ịkwụ AOL ego ahụ. Ya mere, ọtụtụ ijeri dọla ha nwetara na ngwa ahịa ha kpọsara ngwa ngwa.
Ozo nke onwu AOL. Oge nke abụọ dị n'akụkụ ahịa. N'oge na-adịghị anya mgbe njikọta na AOL Time Warner na ndị mmadụ bidoro ịkwaga na ntanetị, AOL Time Warner kwuru na ihe ruru $ 98 ijeri maka 2002, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ụgbụ ego kwa afọ na akụkọ ụlọ ọrụ US.
Nsogbu akụ na ụba ọhụụ na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ mekwara ka esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ AOL na Time Warner. Mana enwere otutu ndi mmadu na Time Warner ndi na enweghi obi uto banyere uzo Digital, enweghi obi uto banyere Intanet, na-echegbu onwe ya na o gha eme ka ndi ahia ha ghara iru ha, ya mere ha chere egwu. Kulturkampf nọchiri anya ya n'ọtụtụ ụzọ a na-akpọ mgbasa ozi ọdịnala na nke a na-akpọ ịntanetị ma ọ bụ mgbasa ozi dijitalụ.
Yabụ na AOL, nke ahụ bụ ntụgharị okwu nke Facebook, mee ngwa ngwa, mmebi. Nke ahụ bụ ihe arụ na saịtị Time Warner, nke, ị maara, mgbe ndị na-eto eto na-eche banyere oge Inc., ha anaghị azụ ahịa ihe ha.
Were nọ na azụmaahịa nke ịbụ ọkọlọtọ eburu ụfọdụ ụdị akwụkwọ akụkọ na mmemme. Mgbe intaneti dara, enwere obi abụọ banyere ụdị azụmaahịa AOL na echiche ya. Na Time Warner, onye dara n'okporo ụzọ ruo ọtụtụ iri afọ dịka ụlọ ọrụ kwụsiri ike, leleziri onye zụrụ ha anya wee sị: Anyị enweghị ike ịtụkwasị gị obi.
Nke na-adịghị arụ ọrụ ọzọ. Ikwesiri itukwasi anyi obi. Mana Jeff Bewkes, onye bụbu onye isi oche nke Time Warners Entertainment na NetworksGroup n'oge ahụ, na-ekwu na nsogbu AOL sitere na enweghị nghọta banyere ịgbanwe teknụzụ ịntanetị, ọ bụghị agha ọdịnala.
nsogbu ịrụzi mbanye
Ekwetaghị m na akụkụ dị mkpa nke ihe ịma aka AOL chere ihu na ụlọ ọrụ Time Warner. Chee echiche banyere ‘90s’ wee tinye mọdem ekwentị gị na modem warara wee jikọọ n’ụlọ gị na sava AOL ruo elekere ise. Enweghị ụgwọ.
Enweghị ikike ma ọ bụ nkwekọrịta nke gị, dị ka AOL, kwesịrị ka gị na ụlọ ọrụ ekwentị na-arụ. Nke ahụ bụ oge pụrụ iche na ọnọdụ. Ma mgbe Intanet mepụtara n’afọ iri mbụ nke 21st narị afọ, ọ malitere ịsọ mpi na ndị mmadụ chọrọ iji brọdband.
Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị bụ AOL ma ọ bụ jiri bandwidth ha, yabụ ọ bụrụ na ị bụ AOL, ị ga - emekọrịta ihe na onye na - eweta brọdbandị. Na mgbakwunye na nsogbu azụmaahịa, AOL enwekwara esemokwu yana Anyị nọ ebe a iji kwupụta isi mmepe na nyocha ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-emegide America Online, ụlọ ọrụ ịntanetị nke Time Warner Inc. nwere, na mkpesa ndị omekome gbara akwụkwọ taa na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ nke Virginia, gọọmentị nwere AOL. boro ebubo na inye aka ma kwado aghụghọ wayo.
Na 2006, AOL na-agbasi mgba ike iji kwado asọmpi ahụ. Site na nde iri na otu na iri na atọ na-abịa eleta AOL nwere Y. karịa ndị nke abụọ kachasị ege ntị na ịntanetị ahoo.
Mana ndebanye ndebanye aha nde AOL ruru 18 nde na-agba ọsọ, na-ahapụ akaụntụ ngwa ngwa ngwa ngwa ha maka njikọ ịntanetị na ngwa ngwa na ịnweta email na-akwụghị ụgwọ, izi ozi na ọrụ ndị ọzọ sitere na ndị asọmpi dịka Google na MSN. Onye ndu AOL bụ Jon Miller n'oge ahụ, onye na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike iburu ụzọ ọzọ dị iche ma ọ bụrụ na ọ nwere nkwado nke Oge Warner na-arịwanye elu. Anyị bu n'uche ịzụta YouTube tupu onye ọ bụla ọzọ.
Anyị nwetara ohere ịmaba na Facebook mgbe Yahoo sụrụ ngọngọ na Tencent, nke bụ mgbe ahụ ụlọ ọrụ nne na nna nke QQ ma bụrụ WeChat ugbu a, nnukwu ụlọ ọrụ na Asia. N'ime ihe ndị a niile, anyị enwetaghị nkwado maka ya. Na 2009 Time Warner malitere AOL dị ka a.
Isi ahia nke AOL abanyela na $ 3.44 ijeri n'oge ahụ. N’afọ ahụ, AOL goro Tim Armstrong, onye bụbu onye isi ọrụ Google, dịka onye isi ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Mgbe anyị nwesịrị AOL ma na-atụgharị Oge Warner, ọ bịara doo anya na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eme iji dozie ụlọ ọrụ ahụ. Nke mbu bu omenaala. Echere m na mgbe m si na efu gaa ụlọ ọrụ $ 150 na Google na AOL, nke si na $ 150 ruo ijeri $ 1, ọ dị mkpa idozi ọdịbendị n'ezie.
Echere m na onye ọrụ ahụ chọrọ otu ihe na nke ahụ bụ inwe okwukwe na atụmatụ ahụ ma kwenye na ebe anyị na-aga. Nọmba abụọ ga-enwe usoro doro anya na atụmatụ maka ebe ụlọ ọrụ ahụ na-aga, ọ bụghị ebe ọ nọbu na isiokwu. Ọ bụ maka ịmepụta ụdị ọdịnaya.
Ọ bụ banyere mmemme mmemme. Ma ọ bụ maka iji data dị ka mmanụ na akụ na ụba ọhụrụ iji nyere AOL aka ịbụ onye ọkpụkpọ buru ibu ma saa mbara n'ihe gbasara ọrụ onwe onye maka ndị mmadụ. Na 2015, Verizon kwupụtara na ọ ga-azụta AOL maka ijeri $ 4.4.
Mgbe anyị rere AOL ka Verizon, enwere ụfọdụ nnukwu ike na ụlọ ọrụ na-agagharị agagharị. Nọmba nke abụọ bụ ụbọchị ndị ahụ dị mkpa, m na-ejikwa ụfọdụ n'ime isiokwu ndị a na-agbagharị gburugburu. Mana m na-ekwukarị na data bụ mmanụ nke akụnụba ọhụrụ chọrọ data mkpanaka.
Nke atọ bụ na anyị ga-emefu ego na afọ ojuju. Companlọ ọrụ dịka Netflix na ụlọ ọrụ ndị ọzọ bịara, n'agbanyeghị na anyị nwere afọ ojuju, agha na agbụrụ maka ọdịnaya chọrọ nnukwu ego, anyị bụkwa ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị na-etinye ego na-achọghị ịbawanye ọkwa ndị ahụ site na itinye ego na mobile. na isiokwu ohere inweta n'ezie nnukwu.
Ya mere, anyị malitere iche echiche banyere mmekọrịta anyị na Verizon bịara dịka azịza sitere n'okike maka nsogbu atọ ma ọ bụ ise kachasị mkpa anyị hụrụ na azụmaahịa anyị n'ọdịnihu. Na 2017, Verizon zụtara Yahoo ma jikọta AOL na Yahoo n'ime nkewa akpọrọ Oath. Isi ihe mere azụmahịa Yahoo ji nwee nghọta maka Verizon bụ n'ihi na ụlọ ọrụ dijitalụ anyị nọ n'etiti akụ na ụba dijitalụ na ikekwe nnukwu mgbanwe nke meworo n'ụwa.
Na Verizon nwere ike ịdọta ihe ruru otu ijeri ndị ọrụ n'otu oge ego dị n'etiti AOL na Yahoo. Yabụ ọ bụrụ n'ile anya na 2019, njirimara Verizon mgbasa ozi anyị jikọtara ọnụ na Oath bụ nke anọ kachasị ukwuu Enweghị ụlọ ala dijitalụ na United States. Dị ka AOL Time Warner, Oath nwere ezigbo amụma amụma.
Mgbe anyị jikọtara ụlọ ọrụ ndị ahụ, ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere ihe ruru ijeri $ 8. Ya mere, anyị ruru $ 10, ma ọ bụrụ na i were ọnụ ọgụgụ nkịtị na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ a ga-enweta. Na m na-eche, e nwere gaara $ 20 ijeri n'anya ma ọ bụrụ na anyị nwere ike na-etinye niile Verizon si akụ na ike n'azụ ya.
Mana Oath nwere mmechuihu ma abiarughi nso $ 20 ijeri na revenue. Na 2018, Verizon kwupụtara na Oath ga - ewe $ 4.6 ijeri, nke pụtara na Verizon ekwetaghị na ụlọ ọrụ ahụ bara uru dị ka atụburu anya ya.
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, Verizon gburu aha Oath kpamkpam, na-eme Yahoo na AOL akụkụ nke Verizon Media. Olileanya m na nrọ m maka AOL bụ mgbe niile ka AOL nọrọ na etiti ala ntanetị. N'agbanyeghị na ihe agbanweela ọtụtụ oge, echere m na akara AOL ka bụ otu n'ime akara ngosi kachasị ama n'oge a nke mgbanwe kachasị ịtụnanya emetụla mmadụ.
Echere m na AOL ga-agbadata n'akụkọ ihe mere eme dị ka ụlọ ọrụ nke nwere oge ya, ọ gafere, ma ugbu a na-agbago n'ime ọdịda anyanwụ. Echere m na ọ bụ eziokwu nke azụmahịa taa na ụdị anaghị adị akwado. Willfọdụ ga-emekwa ọtụtụ agaghị.
Echere m na ebe ọ bụ na ị nwere mgbanwe ọgbọ nke na-enweghị ọnụnọ na enweghị njikọ njikọta na akara, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ akara na-akwado ugbu a.
Kedu ka m ga-esi kagbuo AOL System Mechanic?
Ọ bụrụ na ị ga-achọkagbuoọrụ gị:
Gaa na nke gịAOLAkaụntụ M na myaccount.aol.na.
Ọ bụrụ na a kpalie gị ịbanye, jiri ya rụọ ọrụAOLihuenyo aha na paswọọdụ.
A ga-ebute gị na taabụ Ọrụ M. Pịa naNhazi usoro/ Chọọ ma gbakee.
PịaKagbuoỌrụ ọzọ iji gosi.
Ọkt 23 2019
Kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara AOL IMAP?
Jonathan Fisher bụ onye na-ahụ maka nkà na ụzụ na-akwado CompTIA nwere ihe karịrị afọ 6 na-ede akwụkwọ maka mbipụta dịka TechNorms na Help Desk Geek. Yahoo! Ozi Gini mere IMAP? Nweta ozi AOL gị ma zaghachi ya na ozi ịntanetị ma ọ bụ ngwa ọ bụla dakọtara site na itinye ozi doro anya gbasara AOL Mail na akaụntụ gị.
Olee otú iji melite AOL Mail ntọala?
Ọ bụrụ na ịchọrọ naanị ntọala AOL gị na enweghị ozi ndị ọzọ, lee ị ga-aga: Ndị a bụ ntọala SMTP na POP / IMAP maka ozi AOL: 1. AOL SMTP Ntọala SMTP Server aha: smtp.aol.com SMTP Aha ojii: gị dum AOL email address (gụnyere '@ aol.com') 2. AOL POP Mail Setting AOL Server aha: pop.aol.com 3.
Gịnị bụ aha ihe nkesa maka email AOL?
AOL Server aha: smtp.aol.com. Aha njirimara SMTP: adreesị ozi-e AOL gị niile (gụnyere “@ aol.com”) You nwere ike iji otu ntọala sava email na-ahazi ntọala AOL gị maka ngwa mail ma ọ bụ Windows 10, Apple iPhone ma ọ bụ ngwa mkpanaka gam akporo, ma ọ bụ mmemme ihe nchọgharị weebụ.
Kedụ ka m ga-esi nweta akaụntụ email AOL m?
Nweta ozi AOL gị ma zaghachi ya na ozi ịntanetị ma ọ bụ ngwa ọ bụla dakọtara site na itinye ozi doro anya gbasara AOL Mail na akaụntụ gị. Tinye ntọala nkesa AOL Mail IMAP iji nweta ozi AOL Mail na folda na Outlook, Mac Mail, Windows 10 Mail, Thunderbird, Incredimail, ma ọ bụ na ngwa email maka ndị na-eweta ọrụ dakọtara.